Iiphaneli zophahla lwePvc zeplasitiki |
Iiphaneli zophahla lwePvc zeplastiki
Iipaneli zodonga lwePVC Iplastiki yePVC yophahla lwePlasifle yamaqabunga ama-SMARTROOF ibiluphawu lokuophahla lobungcali iminyaka engaphezu kwe-10. Sikwaqhubeka nokutyala imali kunye nemveliso engcono kunye neendlela zokhetho zokuphahla. Ngeli xesha, sinikezele ngenkxaso yobuchule kubathengi bamazwe angaphezu kwe-15. Sinethemba lokuba sinoku …………………
Iiphaneli zoPhahla lwePlasc zeWall Pvc:
Iipaneli zodonga lwePVC Iplastiki yePVC yophahla lwePlasifle yamaqabunga ama-SMARTROOF ibiluphawu lokuophahla lobungcali iminyaka engaphezu kwe-10. Sikwaqhubeka nokutyala imali kunye nemveliso engcono kunye neendlela zokhetho zokuphahla. Ngeli xesha, sinikezele ngenkxaso yobuchule kubathengi bamazwe angaphezu kwe-15. Sinethemba lokuba sinoku ......
Ukomelela I-0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm
Ububanzi I-720mm, 900mm, 910mm, 930mm, 940mm, 1050mm, 1088mm, 1130mm
umphezulu I-ASA + PMMA
umbala iorenji, ibomvu rick, ibomvu eshushu, luhlaza, luhlaza, grey, mhlophe njl.
Imibala ekhethekileyo inokucocwa ngokweembonakalo zombala weketi ukuba ubungakanani beodolo bungaphezulu kwe-5000 yeekhilomitha.
Isixhobo I-PVC + i-UPVC + i-APVC + i-resin syntena
Uhlobo lweetayile Isitayile sasebukhosini / seSpanish, isitayile samaRoma, isitayile saseYurophu, amaza amancinci, amaza amakhulu, iTrapezoidal
Uphahla lwePlasitiki lwePVC ePlasitiki yamaEva
Apha ngezantsi, iya kuba yi-Flat Roof Production Introductio
Into uNo. Iphepha le-PVC Flat
Ukomelela 1.5 mm / 1.8 mm / 2.0 mm / 2,5 mm / 3.0 mm
Ubude NjengoMfuno / uMgangatho
Ububanzi bebonke I-1000 mm
Umbala Mhlophe / Luhlaza / luhlaza / Yenza ngokwezifiso
Isiqinisekiso Iminyaka esi-8
Umbala omde uyahlala
Nawuphi na umbuzo, pls ungathandabuzi ukunxibelelana nam, kwaye sihlala sisenkonzweni yakho.
1.Prompt kunye neNtelekelelo yeXesha elichanekileyo
Edlulileyo: Pvc Uphahla lwendlu
Okulandelayo: I-Resin Flof Roof
Amaphepha eeNdawo eziPhezulu zePvc Corrugated
Ukucoca kophahla olucocekileyo
Amaphepha eplastiki Resin ophahla